Zvipo Zvakapiwa Mamishinari Zvematiketi 19 000 Endege
Muna July 2013, Dare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha rakatumira tsamba yaiva nemashoko anofadza kumamishinari nevamwe vari mubasa renguva yakazara vanoshumira vari kune dzimwe nyika. Tsamba yacho yaitaura nezveurongwa hwekuvabatsira kuenda kumagungano emunharaunda kana kuti enyika dzakawanda aizoitwa kubva muna 2014 kusvikira gore ra2015 richangotanga.
Urongwa uhwu hahuna kungoitirwa kuti vakwanise kupinda magungano acho chete asiwo kuti vaonane nehama neshamwari. Tsamba yacho yakataura kuti sangano raizovatengera matiketi endege ekuenda nekudzoka.
Kunyange zvazvo urongwa hwakadai hwakamboitwa kare, iye zvino hwaizenge hwakati siyanei. Pakaumbwa dhipatimendi rainzi World Headquarters (WHQ) Travel, raizoshanda riri pasi peKomiti Yekudzidzisa yeDare Rinotungamirira uye raizobatsira pakutsvaga nekubhadhara zvaidiwa panzendo idzi.
Tsamba yacho payakangotumirwa, vamwe vakabva vatotanga kukumbira veWHQ Travel kuti vavatsvagire matiketi endege. Pakazosvika January 2014, vanhu vakawanda chaizvo vakanga vakumbira kuti vatsvagirwe matiketi. Boka rakapiwa basa rekuona nezveurongwa hwenzendo idzi rakatsvakurudza uye rakabhadhara zvese zvaidiwa panzendo dzacho.
Dzimwe nzendo dzainge dzakaoma kuronga. Vanhu vaibva kuReykjavík, Iceland, vaida kuenda kuCochabamba, Bolivia. Vamwe vaibva kuNouméa, New Caledonia, vaida ndege dzaizovasvitsa kuAntananarivo, Madagascar. Vamwe vakakwira ndege vachibva kuPort Moresby, Papua New Guinea, vakananga kuSeattle, Washington, U.S.A., uye vamwewo vaibva kuOuagadougou, Burkina Faso, vachienda kuWinnipeg, Canada.
Chikwata cheWHQ Travel icho chaiva nevanhu vashanu chakatenga matiketi endege 19 000, chikaatumira kuvanhu vanenge 4 300 vaiva munyika 176. Matiketi acho akatengwa nemari yakanga yatumirwa neungano dzakasiyana-siyana yekutsigira urongwa uhwu.
Vaya vakaitirwa urongwa uhwu vakatenda zvikuru. Mumwe murume nomudzimai vanoshumira semamishinari, vakanyora kuti: “Tiri kudzokera kuSoutheast Asia nhasi. Tinokutendai zvikuru nekutibatsira kwamakaita kuti tikwanise kudzoka kuEngland, nyika yatakaberekerwa, kuti tionane nehama dzedu dzatakapedzisira kuonana nadzo makore mashanu adarika. Dai pasina kuitwa urongwa uhwu, tingadai tisina kukwanisa kuzviita. Saka tinokutendai nemwoyo wose imi mose makaita kuti urongwa uhwu hubudirire.”
Mumwe mumishinari ari kushumira ari kuParaguay akanyora kuti: “Ini nemudzimai wangu tinotenda chaizvo nemukana watakawana wokupinda gungano renyika dzakawanda rakaitwa kuNew Jersey, U.S.A. Gore ra2011 richangotanga takabva tatanga kuronga kuzoshanyira mahofisi edu makuru ari muUnited States. Taiva nemari yatakanga tachengeta kuitira rwendo irworwo. Asi muna June gore iroro, takakumbirwa kuti tishanyire ungano dzemutauro wemasaini muParaguay. Izvi zvaizoita kuti tigare tichifamba. Patakanyatsofunga nezvazvo, takasarudza kushandisa mari iya yatakanga tachengeta kuti titenge motokari, iyo yaizotibatsira kuti kufamba kuve nyore pakuita basa ratakanga tapiwa. Zvadaro, takazokokwa kuti tipinde gungano renyika dzakawanda. Saka zvataishuvira zvakabva zvaitika! Tinotenda Jehovha zvikuru nezvaakatiitira izvozvo zvinoratidza kuti akanaka uye anotida.”
Mumwe murume nemudzimai vari kuMalawi vakanyora vachiti, “Tiri kungoda kutumira e-mail iyi tichiti makaita basa zvikuru! Tinoziva kuti kuronga kwamakaita nzendo dzese idzi ibasa guru chairo rinoda nguva nemari yakawanda. Tinotenda kushanda nesimba kwamakaita, uye kupfuura zvose tinotenda sangano raJehovha rakaita kuti tikwanise kumbodzoka kumusha tichinopinda gungano renyika dzakawanda uye tichionana nehama neshamwari.”
Vaya vaishanda mudhipatimendi reWHQ Travel vainakidzwa nebasa ravo. “Chaiva chikomborero chaicho kubatsira mamishinari kudzokera kumusha kuti ambonoonana nehama neshamwari,” akadaro Mileivi. Dorise akatiwo, “Zvakandibatsira kuona kuti vaya vari kushumira vari kune dzimwe nyika vanodiwa chaizvo nesangano.” Uyewo Rodney, mutariri wedhipatimendi racho akati, “Takanakidzwa chaizvo nekuita basa iri.”
Zvapupu zvaJehovha zviri pasi rose zvakawana mukana wekupa mipiro yakaita kuti hama dzavo nehanzvadzi dzakazvipira nemwoyo wose uye dzinoshanda nesimba dzikwanise kuwana chipo ichi.